Banijya News | » हिमाल आरोहणका लागि २ सय ९६ जनाले लिए अनुमति, कुन हिमाल आरोहणमा कति ? हिमाल आरोहणका लागि २ सय ९६ जनाले लिए अनुमति, कुन हिमाल आरोहणमा कति ? – Banijya News
हिमाल आरोहणका लागि २ सय ९६ जनाले लिए अनुमति, कुन हिमाल आरोहणमा कति ?
चैत २४, काठमाडौं ।
यस वर्षको वसन्त ऋतुमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहितका हिमाल आरोहणका लागि २ सय ९६ जनाले आरोहण अनुमति लिएका छन् । हिमाल आरोहणका लागि अप्रिल ५ अर्थात् चैत २३ गतेसम्म ३६ टिमले आरोहण अनुमति लिएका हुन् । हिमाल आरोहका लागि अनुमति लिनेमा ७३ जना महिला र २ सय २३ जना पुरुष रहेको पर्यटन विभागकी निर्देशक मीरा आचार्यले जानकारी दिइन् ।
आरोहण अनुमति लिनेमध्ये विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोणका लागि सबैभन्दा बढी रहेका छन् । सगरमाथा आरोहणका लागि १६० जनाले अनुमति लिएका हुन् । सगरमाथा आरोहणका लागि परिमट लिएका मध्ये १६ जना बराइनी राजकुमार सहितको सदस्य हो । त्यस्तै अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि ४४ जनाले अनुमति लिएका छन् । यसैगरी ल्होत्सेको लागि ३९, नुप्त्सेको लागि २३, धौलागिरी १५ र अन्य हिमल आरोहणको लागि १५ जनाले अनुमति लिएका छन् । पर्यटन विभागले आरोहणलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन भन्दै ११ वटा सर्तसमेत जारी गरिसकेको छ । विभागले एजेन्सीका तर्फबाट पर्वतारोहणसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि आधिकारिक व्यक्ति तोकेर पठाउनुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ ।
यसबाहेक पर्वतारोही दलले पर्वतारोहणबाहेक अन्य थप गतिविधि गर्ने भएमा अनिवार्य जानकारी गराई स्वीकृत लिएर मात्र त्यस्तो गतिविधि गर्न विभागले भनेको छ । कुनै पनि पर्वतारोही दल तथा दलका सदस्यले फोटो, भिडियो तथा फिल्मङसम्बन्धी काम गर्दा आफूसम्बद्ध दल र दलका सदस्यको आरोहण गतिविधिबाहेक अन्यको फोटो, भिडियो खिच्ने तथा फिल्मिङसम्बन्धी काम गरी त्यसको प्रचार–प्रसार तथा प्रकाशन गर्न नपाइने गरी सर्तहरु जारी गरेको छ ।